Dood la xiriirta Niqaabka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dood la xiriirta Niqaabka
Publicerat torsdag 28 januari 2010 kl 11.58
Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt oo dood ku dhexmartay idaacadda Iswiidhen laanteeda Studio Ett. Foto: Peter Johansson/SR.
Arbacadii shaleyto galabnimadii oo ey markii saddexaad toddobaad gudihii hardi isaga horyimaadeen labada hogaamiye ee xibiyada Mudarat-ka, Fredrik Reinfeldt, ahna siyaasiga ay ka dambeeyaan afarta xisbi ee talada dalka isku baheeystay iyo Hogaamiyaha xisbiga Socialdemokrat-ka, Mona Sahlin, islamarkaana horboodda saddexda xisbi ee mucaaradka.
Doodda hogaamiyeyaasha oo ka dhacday idaacadda leeyska dhageeyst Raadiyo Iswiidhen laanteeda Studio Ett, ayaa socotay 45 daqiiqadood iyadoona looga falanqooday su’aalo ay ka mid yihiin: Habka ay labada garab ee ku looltamaya doorashada foodda nagu soo heeysa, ey awood ugu leeyihiin inay dalka maamulaan, ceeymiska bulshada iyo shaqa la’aanta.
Shirkadda Saab oo dhowaantan yeelatay mulkiile cusub kadib welwel sannad ay wadnaha farta ku hayeen shaqaalaha shirkadda gawaarida ee Saab automobile, ayey Mona Sahlin ku dhaleeceeysay dawladda uu madaxda ka yahey Reinfeldt in aaney si wanaagsan uga soo bixin hoowshaa.
- Inay shirkadda gawaarida Saab iyo degmada Trollhätan la badbaadiyey waan ku wada faraxsannahay labadayaduba. In lagu jiro xilli dhaqaale cakiran waan ogsoonahay sida bulshada oo dhammi u ogsoon yihiin, haseyeeshee miyaanay wanaagsanaan laheeyn in dawladdu soo ban dhigto qorshe la xiriira siyaasaddeeda warshadaha, sidaa waxa tiri Mona Sahlin.
Madaxa dawladda Reinfeldt, ayaa middaa isaga difaacay isaga oo ku eedeeyey Mona Sahlin inay dooneyso taageero dhaqaale ee warshadaha la siiyo, inkastoo ay hadalka si kaleeto u dhigtay buu yiri haddana middaa ayey ula jeeday.
- Annagu waxaan xoogga saarnay shaqaaleeynta ruuxa iyo sidii meelo kale looga hoowlgelin lahaa haddii baahi noocaasiya timaado. Sidoo kale waxyaabihii laga dooday waxaa ka mid ahaa habka ay u labistaan qaarkood haweenka muslimiinta ee ku dhaqan dalkan Iswiidhen, middaasina oo ka dambeeysay olole ka socda dalka faransiiska oo lagu doonayo in laga mamnuuco haweenka niqaabka qaata ee dalkaasi inay niqaab ku dhex mushaaxaan goobaha bulshada ka dhaxeeysa, sida goobaha tareemada . Fredrik Reinfeldt, oo su’aal middaa la xiriirtay aan si toos ah uga jawaabin iyo inuu iska fogeeyo fikirkan loo ololeeynayo ee dalka Faransiiska ka socda iyo in la mamnuuco niqaabka, waxaa ereyadiisii ka mid ahaa:
- In aannu iska caabino qeeylo dhaanta in haween badani ku qasbanaadaan iney niqaab qaataan. Tusaale ahaan dooni meeyno in middaa ay dalkan Iswiidhen ka dhacdo, waannuna ka hortageeynaa. Mona Sahlin oo isla su’aashaa ka jawaabeeysa waxaa y tiri:
-Xorriyadda diintu waxey macnaheedu tahay in ruuxu xor u ahaado inuu diin galo ama ka baxo. Middaa waxaan ula jeedaa inaan abdikey u dagaalami doono xoriyadda ay habluhu u leeyihiin inaaney Niqaab qaadan, iyo xorriyadda ey u leeyihiin inay garbasaartooda qaataan. Halkaana waxaa la oran karaa inuu ka biloowday loolankii doorashada ee sannadkan 2010 ee labada garab ee midigta iyo bidixda.